News | पीएसजी
News | Tag: पीएसजी
एम्रीले अझै बार्सिलोनासँगको अप्रत्यासिक हार बिर्सेका छैनन
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका पूर्व प्रशिक्षक युनाई एम्रीलेले बार्सिलोनासँगको हार अझै बिर्सेका छैनन् । सन् २०१७ मा भएको च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा ६–१ गोलको हार व्यहोर्दै च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएपछि उनीले इंग्लिस क्लब सम्हाले ।
डर्टमण्डका हालाण्डलाई पीएसजीका सबै खेलाडीले किन ट्रोल गरे ?
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीले च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ । जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमण्डलाई समग्रमा ३–२ गोलले पाखा लगाउँदै पीएसजीले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
खाली रंगशालामा डर्टमण्डविरुद्ध पीएसजीको जित
काठमाडौँ । फ्रान्सेली क्लब पीएसजी च्याम्पियन्स लिगको क्वाटर फायनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार राति सम्पन्न अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा डर्टमण्डलाई २–० गोलले पछि पादै समग्रमा ३–२ गोलको जित निकालेर पीएसजी क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेको हो ।
लिग वान: पीएसजीद्वारा डिजोन पराजित
एजेन्सी । फ्रेन्च फुटबल लिगमा पीएसजीले सानदार जित निकालेको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा पीएसजीले घरेलु मैदानमा डिजोनलाई ४–० गोल अन्तरले हराएको हो ।
नेयमारको छोराकी आमाको बारेमा जानकारी छ ?
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका स्टार खेलाडी नेयमार १९ वर्षको उमेरमा नै बुबा भएका हुन् । नेयमार सन् २०११ को अगष्ट १३ मा बुबा बने । त्यतिबेला उनी ब्राजिलियन क्लब सान्तोषबाट व्यवसायीक फुटबल खेलिरहेका थिए । नेयमारको छोराको नाम डेभी लुका हो । तर, डेभी लुकाको आमा को हुन् भनेर धेरैलाई थाहा छैन ।
नेयमारलाई रेड कार्ड, पीएसजीको कठिन जित
काठमाडौँ । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका स्टार खेलाडी नेयमारले रेड कार्ड पाएका छन् । आइतबार राति सम्पन्न फ्रेन्च लिग वानमा अन्तर्गत बोर्डेउविरुद्धको खेलमा नेयमारले रातो कार्ड पाएका हुन् । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पीएसजी ४–३ गोलले विजयी भएको थियो ।
पीएसजीका अध्यक्ष खिलाफीमाथि फौजदारी अपराधको आरोप
नासेर अल खिलाफी
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका अध्यक्ष नासेर अल खिलाफीमाथि फौजदारी अपराधको आरोप लगाइएको छ । कतारी व्यापारी खिलाफीलाई स्विजरल्याण्डस्थित विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको एटर्नी जनरल कार्यालयले फौजदारी अभियोग लगाएको हो ।
हालाण्ड चम्किँदा डर्टमण्डको जित, पीएसजी पराजित
एजेन्सी । लामो समयको अन्तरालपछि च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा बोरुसिया डर्टमण्डले जित निकालेको छ ।
चोटको कारण नेयमारले डर्टमण्डविरुद्धको खेल गुमाउनसक्ने
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका स्टार खेलाडी नेयमारले जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमण्डविरुद्धको खेल गुमाउनसक्ने भएका छन् । च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को पहिलो लेग अन्तर्गतको खेलसम्ममा उनी नहुनसक्ने भन्दै शंका उत्पन्न भएको हो ।
एम्रीको ठूलो चित्तदुखाई
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पीएसजीका पूर्व प्रशिक्षक युनाइ एम्रीले बार्सिलोना र पीएसजीबीचको खेलको बारेमा टिप्पणी गरेका छन् । आर्सनलको बर्खास्तीमा परेका एम्रीले फ्रान्स फुटबलसँग कुरा गर्दै उनले च्याम्पियन्स लिगको नकआउट राउण्डमा बार्सिलोनाले अप्रत्यासित रुपमा पराजित गरेको बारेमा कुरा गरेका हुन् ।